▷ Philips Airfryer XL ▷ Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican ee RapidAir Fryer
Waxaan kuu soo bandhigaynaa Philips Airfryer XXL, hal Qalab Bilaash ah kaas oo isticmaala hawo kulul si loo kariyo cuntooyinka hab ka caafimaad badan cuntooyinka shiilan ee dhaqanka ah.
Aniga oo tixgelinayna taas Astaantan ayaa suuq geysa mid ka mid ah shiilanyada cuntada ee ugu iibinta badan dalkeena, Habkani waa hubaal inuusan niyad jabin oo wuxuu noqon karaa ikhtiyaar wanaagsan qoysas badan.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhrinta si aad u ogaato qeexitaannada, fikradaha isticmaaleyaasha ku raaxaysanaya, qiimayaasha iyo su'aalaha kale ee khuseeya ee ku caawin doona si aad u ogaato in ay ku haboon tahay gurigaaga.
Philips HD9762 Fryer
Eeg Qiimaha La Heli karo
➤ Astaamaha Muuqda ee Airfryer XL
➤ Qiimaha Spain
➤ Iibso Airfryer XXL
Maxay yihiin sifooyinka ka muuqda qaabkan? Aynu si faahfaahsan u aragno waxa qaabka XL uu bixiyo.
▷ Awoodda 1.4 Kilo
Shiilan wuxuu leeyahay awood 1,4Kg, taas oo ku filnaan lahayd si aad u kariso qiyaastii 5 xabbo. Qaabkan Philips waxa la siiyay magaca 'XL', sababta oo ah waxa ay ku dhowdahay in ay labanlaabto awoodda qalabkeeda ugu iibinta badan, HD9220/20.
▷ 2225 Watts oo Awood ah
Awooddu waxay ahayd mid kale oo ka mid ah horumarka ugu muhiimsan ee noocaan, si loo dedejiyo wakhtiyada cunto karinta. Iska caabinteeda 2225 W waxay ka dhigan tahay awood ka sarreysa celceliska qalabka noocaan ah, Kaas oo hubinaya cunto karinta wanaagsan.
Qalabka waxay u ogolaataa heerkulka iska caabinta in la hagaajiyo inta u dhaxaysa 60˚ iyo 200˚C ugu badnaan, taas oo bixisa ugu badnaan si loo kariyo cuntooyin kala duwan.
▷ Farsamada Hawada Degdegga ah
Philips waxa ay isticmaashaa tignoolajiyada hawada degdega ah ee ay shatiyada u siisay summadu, in kasta oo ay runtii ku tiirsan tahay cunto kariska hawo kulul sida inta badan Fryers Saliida Xorta ah.
Farsamadani waxay kuu ogolaanaysaa inaad shiil, dubto, dubto oo aad karsato adigoo isticmaalaya wax yar ama saliid adigoon walaaqin cunto.
Habkani wuxuu bixiyaa nadiifin aad u fudud oo gaar ahaan degdega ah ee kuwa ugu mashquulka badan. Khaanadaha la saari karo iyo dambiisha meesha cuntada la geliyo labadaba Waxa lagu ridi karaa makiinada weelka dhaqda si ay nooga badbaadiyaan shaqada gacanta lagu dhaqo.
▷ Xakamaynta dhijitaalka ah ee leh badhanka casriga ah
Heerkulka iyo wakhtiga karinta labadaba waxaa laga maamulaa kontaroolaha taabashada dhijitaalka ah kaas oo aad si fudud ula falgeli karto. Waqtiga kala duwan ee qaabkani kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso waa 0 ilaa 60 daqiiqo.
Fryer-kani waxa uu ku siinayaa suurtogalnimada waqti iyo isku darka heerkulka badbaadi taas oo u dhiganta suxuunta aad inta badan diyaariso ama cuntooyinka aad jeceshahay. Sidaa darteed, adigoo riixaya badhanka waxaad bilaabi kartaa karinta saxanka aad jeceshahay.
Kani waa nooc is haysta oo awoodiisa weyn, oo ku salaysan habka khaanadaha la rari karo ee gacanta ku leh, dhaqameed ee Fryers-Free Oil-free. Caagagga madow ama caddaanku waa maaddada dhammaynteeda waxayna leedahay tignoolajiyada qabow ee dibedda, taas oo ka caawisa ka hortagga gubashada, mid ka mid ah shilalka ugu badan ee guriga.
Waxay leedahay cago aan simbiriirixan lahayn si uu qalabku meesha ugu jiro iyo fiilada fiilada ah ee la taaban karo.
Cabirrada: 422xXXUMXx314 mm
Miisaanka: 7 Kiilo.
Soo-saareyaashu waxay bixiyaan muddo ah 2 sano damaanad caalami ah, kaas oo sidoo kale u hoggaansamaya sharciga Isbaanishka.
Qiimaha nooca fryer-ka ah waa mid aad u sarreeya, iyadoo la tixgelinayo inuu ku dhow yahay 300 euro. Si kastaba ha ahaatee waxaan ka hadlaynaa Philips, oo ah calaamad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo leh sharaf ku filan marka la eego tayada qalabka guud ahaan.
Xiriirka soo socda waxaad ogaan kartaa qiimaha hadda ee model this fryer.
Fryer XXL ee qoyska: ku kari digaag dhan ama 1,4 kg oo shiilan Faransiis ah oo leh baaquli 7,3 l ah iyo dambiisha weyn ilaa 6 qaybood - 5 barnaamijyo horay loo diyaariyey oo leh shaashadda taabashada
Habka ugu caafimaad badan ee wax loo kariyo: Cuntooyin dhadhan fiican leh oo nafaqo leh oo ilaa 90% dufanku ka yar yahay - shiil, dubay, dubay, dubay oo xataa kula kulay hogaamiyaha caalamiga ah ee frying-ha**
Cuntooyinka La Shakhsiyeeyay: Soo deji NutriU app si aad u hesho cuntooyin dhiirigelin leh oo ku saabsan nolol caafimaad leh oo ku habboon dookhyadaada - Si fudud u raac tallaabo tallaabo
Bannaanka dibadda, hindise gudaha ah: Hawada degdega ah waxay abuurtaa wareegga hawada kulul ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay cunnooyinka qallafsan iyo kuwa jilicsan - Ka saarista baruurta ayaa kala saarta oo qabta baruurta xad dhaafka ah
Nadiifinta dadaal la'aanta: Premium Airfryer XXL oo leh qaybo badbaado leh oo meesha laga saari karo
Haddii aysan weli caddayn waxa ay tahay ama sida ay u shaqeyso, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aragto kuwan soo socda muuqaalka oo aad si qoto dheer uga arki karto arrimahan.
Inkastoo aysan helin dhibco heer sare ah, Amazon waxay leedahay dhibco ah 3.9 marka loo eego 5. Fikradaha iibsadayaasha dukaankan oo kale, iyo sidoo kale bogga soo saaraha ayaa guud ahaan wanaagsan. Guji qaybtan si aad naftaada u aragto waxa ay faallooyinku yihiin iibsadayaasha iibsaday alaabtan.
Haddii aad raadineyso a Shiilan aan saliid lahayn oo xooggan oo adagCunto karinta iyo muuqaalka labadaba, ka dib Philips Airfryer XL ayaa laga yaabaa inuu kugu habboon yahay. Inkasta oo qiimihiisu aad u sarreeyo, haddana waxay ka kooban tahay a qalab waxtar u leh guri ay ku wada nool yihiin in ka badan saddex qof.
Waxaad ku karin kartaa suxuun caafimaad leh oo leh saliid aad u yar, si aad u tixgeliso sida a maalgelin weyn si loo horumariyo caafimaadkaaga.
Barnaamijyada Xasuusta leh
Mashiinka weelka lagu dhaqo oo aamin ah
Sumad la aqoonsan yahay oo khibrad leh
Ma qiyaasi kartid cuntada
Hoos waxaan ku tusinaynaa isbarbardhigga Fryers-ka Saliidda bilaashka ah ee la midka ah moodelkan marka loo eego qiimahooda.
Boggayaga internetka waxaad ka heli doontaa maqaallo la mid ah oo ku saabsan moodooyinka kale ee Saliida Philips Free Fryers taasi waxay ku xiisaynaysaa, inkasta oo haddii moodelkani kugu qanciyo badhanka soo socda, waxaad hadda ka iibsan kartaa shiilan online.
Iibso Airfryer XXL
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Philips Air Fryer » HD9240/90 Advance Airfryer XL